ရာဇ၀င်ထဲမှ ပျောက်ဆုံးနေကြသူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » ရာဇ၀င်ထဲမှ ပျောက်ဆုံးနေကြသူများ
Posted by စဆရ ကြီး on Jun 22, 2011 in Myanmar Gazette, Opinion - Op-ed | 11 comments
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ စာတွေအတော်များများ တက်လာတော့ ဖတ်နေရပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်စာတွေအရေးကောင်းတဲ့ Hmee ပြောသလိုပါပဲ၊ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စွမ်း၊ ဥာဏ်စွမ်းရှိသလောက် ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်တွေ၊ အရေးအသားတွေနဲ့ ရေးတင်နေကြသူတွေ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွေကို ရေးသားတင်ပြနေကြတဲ့ စာရိုက်သူတွေ၊ ဥပမာဆို “ဆူး”၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်လဲ ဒီ Site ကို ၀င်ရောက်ဖတ်နေကြတဲ့သူတွေ ပညာရရှိစေရေးအတွက် KFC ကြက်ကြော်နည်းတွေကို အသေးစိတ် ရေးပြဖို့ရှိသလို တစ်ခြားသော ဗဟုသုတရဖွယ်ရာတွေကို ချပြဖို့ရာ အများကြီးရှိနေပါတယ်။
ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ Post တစ်ခု (ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်ဆို သိပ်ကို တန်ဖိုးရှိမယ်လို့ထင်တဲ့ စာတွေ)ခမျာ တစ်ရက်တာတောင် စံမြန်းခွင့်တွေမရဘဲ အလိုလို နောက်ရောက်သွားရရှာလေတော့ Keyboard ပေါ် လက်တင်လိုက်တာနဲ့ စာရေးချင်စိတ်တွေ ကုန်သလောက်တော့ ရှိနေတာအမှန်ပဲပေါ့လေ။ လူသစ်တွေ များပြားလာတာကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်စာတွေကိုတော့ သီးသန့်နေရာလေးတစ်နေရာ ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ Copy ကိစ္စတွေကတော့ ပြောလဲ မောရုံပဲရှိတော့တာမို့ ဆက်လက်ပြီးပြောလိုရင်းမရှိတော့ပါ။ သူများတွေလဲ သူတို့ရဲ့နာမည်လေးတစ်ခုကို Internet ပေါ်မှာနေရာရချင်ရှာကြမှာဖြစ်သလို ကိုယ်ပိုင်မရေးသားနိုင်ကြသေးသူတွေလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က စာပေကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေကို မလိုက်နာမကျင့်သုံး၊ ကျားလား မလားတောင် ခွဲခြားလို့မရနိုင်သော ကလောင်အမည်များပေး၊ အပျော်ဖတ်စာပေတစ်ခုလို ပုံတွေတင်၊ ဇာတ်လမ်းတွေဖွဲ့နဲ့ ဒီကိုစတင်ရောက်ရှိစဉ်တုန်းက စာရေးကောင်းတဲ့ စာရေးသူတွေ၊ ၀ါရင့်စာရေးဆရာတွေကို မတွေ့မိတော့တာ သတိထားမိတယ်။
စာပေအရေးကောင်းတဲ့ nigimi77 (အနည်းငယ်တော့ကြမ်းပါတယ်)၊ အချက်အလက်တွေတော်တော်များများ ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ သရော်စာသဘောမျိုး အရေးကောင်းတဲ့ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု၊ (ဦး)လင်းဝေကျော်၊ (Dr.) မိုးသီတာစိုး၊ နေ့တိုင်းနီးပါး စာရေးတင်တတ်တဲ့ ဆူး၊ ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေ အရေးများသော (ဦး) ကိုပေါက်(မန္တလေး)၊ Link များနှင့်အတူ စာအတော်များများ၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးငြင်းခုန် (အမှန်တော့ ရန်ဖြစ်စရာတွေသိပ်များတဲ့စာတွေ) ရေးတဲ့ KAI (သူကြီး)၊ ၀ါသနာရှင်အဆင့်ထက်ပိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာသီးသန့်အရေးသမား Hmee၊ အလှနတ်ဖုရားမလေး (သို့) အလှနတ်ယောကျာ်းချောချောလေး (သို့) အီးရိုး ဟုအမည်တွင်သူ …. အစရှိသူတို့ ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ စိတ်လဲအတော်လေးထက်တဲ့ (Dr.) etone သာ ဆူညံ၊ ပူညံ အသံပေါင်းစုံဖြင့် ကျန်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိနေရပါကြောင်း..
အမာခံ စာရေးဆရာများအနေနှင့်လည်း စိတ်အားမလျှော့လိုက်ကြပါဘဲ အများနည်းတူအားကျမခံ တွေ့ကရာ စာတစ်ကြောင်းလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Copy/Paste လုပ်ပြီး ကိုယ့်နာမည်လေး သမိုင်းပြတိုက်ထဲမှာ ပြန်သွားမရှာရလေအောင် ကြိုးစားသင့်ကြပါကြောင်း……
အောင်မြင်နေတဲ့ ၀ဘ်ဆိုဒ်တိုင်းကတော့ ဒီလိုပါပဲဗျာ
တစ်ချို့ ဆိုဒ်တွေဆို တစ်ပြိုင်ထဲ ပို့ စ် ၂၀ ကျော်လောက် တက်တယ်
တစ်ရက်ကိုဆိုရင် ၂၀၀ ၊ ၃၀၀ တောင်ကျော်မလားပဲ..ဖတ်ချင်တဲ့သူ၊လိုချင်တဲ့သူကတော့ သူစိတ်ဝင်စားရာကို သူ့ ဘာသာရအောင် ရှာကြည့်သွားရတာပေါ့
ကော်ပီတွေဆိုပေမဲ့လဲ ဗဟုသုတရမယ်၊မသိတာတွေသိလာရမယ်ဆို ဖတ်ပျော်ပါတယ်
အရေမရအဖတ်မရ ကော်ပီတွေတော့ အားမပေးပါဘူး..
ဒီမှာတော့ ရသစုံ၊စွယ်စုံ ရှိတဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ်ပိုင်ရေး၊ကော်ပီရေး၊ပွိုင့်ရရင်ပြီးရောရေး စသဖြင့်များကြီးရေးနေကြတာတွေ့ ရပါတယ်
ကိုယ်ရေးတဲ့စာ ကိုယ်တာဝန်ယူနိုင်တယ်ဆိုပါက အကုန်ရေးလို့ ရတယ်လို့ သူကြီးကိုယ်တိုင်ပြောထားတာပဲဆိုတော့ မည်သူမှအားမရှော့ စိတ်ဓာတ်မကျပဲ ပုံမှန်ရေးနေကြအတိုင်းရေးသာ ရေးသွားကြပါလေ…
စာဖတ်သူများအပိုင်းကလဲ သူစိတ်ဝင်စားရာကို ရွေးချယ်ဖတ်ရှုသွားပါလိမ့်မယ်
နာမည်တပ်ပြီး မြှောက်ပင့်ပေးလိုက်တော့လဲ comment လေး ပေးရမှာပေါ့ .. စိတ်မလျှော့ပါနဲ့ .. တစ်ခါ ဖတ်မိလို့ စိတ်ဝင်စားစရာဆိုရင် လိုက်ဖတ်ဖြစ်အောင် လိုက်ဖတ်ပါတယ် .. ထပ်ရေးဖြစ်အောင်သာ ရေးပါ ..
ပထမ စာမျက်နှာမှာကို ခေါင်းစဉ်တွေ အများကြီးပြထားတာပဲ .. ကောင်းတဲ့စာမူဆိုရင် မြုပ်မသွားပါဘူး
ကိုယ်ပိုင်စာရေးရတာ အချိန်လဲကုန် ခေါင်းလဲစားတယ် … ခရီးထွက်တဲ့အကြောင်းရေးရင်တောင် အနဲဆုံး ခရီးထွက်တဲ့အချိန်နဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ရင်းပြီးမှ ရလာတဲ့ စာနဲ့ဓါတ်ပုံတွေပါပဲ …. ဟင်းချက်နည်းစာအုပ်ကို ၂၀၀ နဲ့ဝယ်ဖတ်လိုက်ရင် ပေါမှပေါလို့ပြောတဲ့သူရှိပေမယ့် ကျွန်မကတော့ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ကို စေတနာနဲ့အဆင့်ဆင့်ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးမှ ပို့စ်တင်ပေးပါတယ် … (အရင်းအနှီးများတယ်) …. အတွေးအခေါ်ပါတဲ့စာမျိုးဖြစ်အောင် …. ဗဟုသုတတစ်ခုခုရနိုင်တဲ့စာမျိုးဖြစ်အောင် … ရသတစ်ခုခုဖြစ်အောင် … တစ်ခုခုအကျိုးရှိအောင် တတ်စွမ်းနိုင်သလောက် ကြိုးစားရေးခဲ့တာတွေဟာ ကိုယ့်ရာဇ၀င်ကိုယ်ရေးနေသလိုမျိုး .. ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးနေသလိုမျိုးပါပဲ …. home page မှာ ပျောက်သွားပေမယ့် ရွာကြီးထဲမှာတော့ ကျန်ခဲ့မှာ (သူကြီးတာဝန်ယူသရွေ့) …
သူ့ကို ရန်တွေ့ထားလို့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ စိတ်လဲအတော်လေးထက်တယ်တဲ့
ဒီကြားထဲ မျက်နှာလိုမျက်နှာရ Dr. ဘွဲ့လေးပါ တပ်ပေးလိုက်သေးတယ်… ဟုတ်တာမဟုတ်တာ မသိဘူး … အထင်ကြီးခံရလည်း မနည်းဘူးကိုး ။
MBBS ရော PhD ရော လိုက်မမှီပေမဲ့ …ဒေါက်ပါတဲ့ ဒေါက်ဖိနပ်တော့ စီးထားပါတယ်
ဟုတ်လိုက်တာကိုယ့်လူရေ…ဒီထဲထပ်ဖြည့်ပေးရရင် ကြယ်လေး၊ဌက်ကြီး၊အာဂ၊….သူတို့တွေလည်း မတွေ့ရတာတော်ကြာပြီ၊သူကြီးအနေနဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုပေးပြီး ၀ိုင်းဝန်းရေးကြရင် မကောင်းဘူးလားဟင်…စာဖတ်တဲ့သူလဲ စိတ်ဝင်စားမူပိုများလာနိုင်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်၊အကြံပြုကြည့်တာနော် ဆရာလုပ်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့နော်…ကျွန်တော်လည်းဒီရွာလေးကို သံဟောဇဉ်ဖြစ်မိပါတယ်။ဒီထက်ပိုမို ပျော်ရွင်စရာကောင်းတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
ငါရှိတယ်ဟေ့ ငါရှိတယ်ဟ။ ပထမအချက်ပြောရရင် အခုတလော အခြေအနေတွေအရ စာရေးရမှာ စိတ်ကုန်နေလို့ ရေးစရာတွေက တပုံကြီး၊ ပြောချင်တာတွေ အများကြီးပဲ။ လုံးဝ စာရေးတာ ရပ်လိုက်မယ် စဉ်းစားထားမိခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်က အလုပ်များနေလို့ပါ။ အင်းအခုတော့ ရေးနေဦးမယ်စဉ်းစားထားပါတယ်။
(အယ်ရောစ့်၊ အလှအပ နှင့် အချစ်နတ်ဘုရား ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။)
ဒါပေမယ့်ကျနော် ရေးထားတာအကြောင်းအရာစုံ ဒေါင့်ပေါင်းစုံ
နာမယ်ကို ရာဇ၀င်ထဲမှာ မကျန်ချင်ပါဘူး။
ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကလဲ စာတပုဒ်ပါဘဲ နော်။
အခုလို တိုက်တွန်းတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။
ရာဇ၀င်ထဲမှာ မောင့်ကို မထားခဲ့ပါနဲ့ ကွယ်ရို့။
ဒီရက်ပိုင်း စာ သိပ်ရေးဖို့ ဖီလင်မလာလို့ သူများ ရေးထားတဲ့ ပိုစ်တွေ ဖတ်ပြီး လိုက်မန်းနေတာပါ။
၀ါသနာ အရ.. အမှိုက်က အစ ပေါက်ကရ အပြောနဲ့ ရွှေတုံးဖြစ်အောင် ပြောချင်ပါသေးတယ်။
ရွာသားများကို ပြောင်နောက်ရန် ဦးနှောက်စားခိုင်းရန် စိတ်ကူး အသစ်များလည်း ရှိပါသေးကြောင်း။
လူသစ်များ ကော်ပီ တွေ လုပ်နေတာ နိမ်နင်းရေး လုပ်နေတာနဲ့ ရွာသားဟောင်းများ အနည်ထိုင်ပြီးမှ နောက်ရန် အစီအစဉ် ရှိပါကြောင်း။
ရှုံး……လူ ရေ- ယောင်တောင်ပေါင်တောင် အမောင်ကြောင်တို့၊ (ဦး)ဖက်တီးတို့၊ (ဦး)ပါလေရာတို့၊ အန်ကယ်ကြီးတို့လို ရာဇဝင်ရှိတဲ့လူတွေ ကျန်နေခဲ့သေးတယ်လေ။
နေ့တိုင်းတော့ ရောက်ပါတယ်။ ရေးဖို့တွေးလိုက် ပျောက်သွားလိုက် ဖြစ်နေလို့ပါ။ သူကြီးက ရွာထဲကို မလာရတော့ဘူးလို့ နှင်မထုတ်သရွေ့ ၀ါသနာက တားမရလို့ လာနေဦး၊ ရေးနေဦးမှာပါ။